Filtrer les éléments par date : jeudi, 22 août 2019
jeudi, 22 août 2019 21:29
Nicolas Dupuis: Hanoy ny fitantanany sy ho mpanazatran'ny Barean'ny Madagasikara
Nanao tatitra sy nanazava ireo zava-bitany andriamatoa Nicolas Dupuis io maraina io teny amin'ny Carlton Anosy.
Efa fahombiazana lehibe hoy izy iny vokatra farany teo iny ary tsy nampitsanga-menatra ny Malagasy tsivakivolo.
Maro anefa ny ezaka mbola ho arenina, ary nilaza izy fa hisy ny fitsongàna ireo mpilalao manerana ny nosy hoan'ny fifanitsanana manaraka eo.
Misy ny fotodrafitr'asa izay nampanantenain'ny fitondram-panjakana dia ny fananganana sy fanavaozana ny kianja filalaovam-baolina, ary ihany koa sekoly mpamolavola eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra.
jeudi, 22 août 2019 20:41
Forum économique des îles de l’océan indien
Hotontosaina mandritry ny telo andro, ny 25 ka hatramin'ny 27 septambra ho avy izao any amin'ny domaine du Moca any Saint Denis de la Réunion ny Forum économique des îles de l’océan indien.
Ity forum ity moa dia natao hifampivondrona an'ireo mpandraharaha manerana ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indianina. Mpandray anjara manodidina ny 400 eo moa no andrasana amin'izany.
Anisan'ny nanamarika ny androany moa ny conférence niraisana niarahana tamin'ireo nosy rehetra mpandray anjara, na ilay atao hoe "conférence en live".
jeudi, 22 août 2019 20:04
Antoko mpanohitra: Telo hatreto no mijoro ara-dalàna
TIM, TAMAMI ary DFP, ireo hatreto no nambaran-dRazafimahefa Tianarivelo, minisitry ny Ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana fa nametraka taratasy teo anivon’ny ministera fa mpanohitra, manaraka ny didy amam-pitsipika manankery eto amin’ny firenena.
jeudi, 22 août 2019 20:02
CSP Alasora: Tratra ilay mpangalatra bateria
Ny 20 aogositra 2019 dia tovolahy iray 30 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP ALASORA teny Ankadindratombo, resaka halatra «batterie » anà fiara.
Anisan’ny mampitaraina ny mponina eny amin’iny faritra Ankadindratombo sy ny manodidina iny ny fahaverezana bateria mipetaka amina fiara toy izao. Amin’ny alina ireto olon-dratsy ireto no manao ny asa ratsiny, ary tsy mionona fotsiny amin’ny fangalarana ny bateria izy ireo fa mbola manao fanahy iniana ihany koa manimba ny kojakoja rehetra sy ny piesy izay sendra azy ireo ao, toy ny halatra miaro figafiana izany.
jeudi, 22 août 2019 16:37
Kaominina: Manohy ny asany ireo Ben’ny tanàna sy Mpanolontsaina, hoy ny HCC
Namoaka ny heviny (Avis n°08-HCC/AV) ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana androany 22 aogositra 2019 taorian’ny taratasy nalefan’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian, tamin’ny 19 aogositra 2019, manontany ny HCC ny tokony hatao mandram-pahatonga ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina.
Nanazava ny HCC fa tapitra amin’ny 18 septambra 2019 ny fe-potoana iasan’ny Ben’ny tanàna, ary tsy miankina amin’iireto farany ny fanemorana ny fifidianana. Mangina tsy ahitana rijan-teny rahateo, na ny Lalampanorenana, na ny lalàna, manoloana io fahabangana io. Ny asam-bahoaka anefa mila mitohy.
Nilaza ny heviny ny HCC fa manohy ny asany ireo Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina mandram-pifidy ireo Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina vaovao. Tsy mahasolo Ben’ny tanàna tapitra fe-potoana iasana ny fametrahana mpisolotoerana, hoy hatrany ny HCC.
Toy ny mametra-pialana avy hatrany kosa ireo Ben’ny tanàna sy mpanolontsaina mirotsaka hofidiana.
Vetivety dia ritra ny solika eny amin’ny toby mpaninjara. Any amin’ny varomaizina no hita ny solika. « Ireo varotra amin'ny bidon mavo no mandany solika amin’ny station aty », hoy ny mpanjifa.
5000 Ariary ny litatra ho an’ny lasantsy eny amin’ny varomaizina. Tsy azo antoka anefa satria misy manafangaro rano na zavatra hafa ny solika eny amin’ny sisiny, ka maro ny motera simba aterak’izany.
jeudi, 22 août 2019 09:03
Ankililoaka Toliara II: Tonga nanampy ilay zazavavy kely niharan'ny fanolanana ny Ministeran'ny mponina
Tonga nanome fanampiana an’ilay zazavavy kely niharan’ny fanolanana taty amin’ny Fokontany Anjaroa, Kaominina Ankililoaka, Distrikan’ny Toliara II, ny Talen’ny Kabinetra niaraka tamin’ny Tale-paritry ny Minisiteran’ny Mponina avy any atsimo andrefana ny 19 aogositra 2019 teo. Nanatrika izany ny solotenan’ny ben’ny tanàna teto an-toerana.
jeudi, 22 août 2019 09:01
Antanambao I - Toliara I: Nanampy ireo zaza jamba
Nitohy taty amin’ny fokontany Antanambao I, Distrikan’ny Toliara I ny fitsidihana sy fanomezana fanampiana nataon’ny avy amin’ny Minisiteran’ny Mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy.
Ivon-toerana misahana ireo zaza jamba no notolorana vary fotsy, tsaramaso ary legioma . Zaza miisa 71 no beazina ao.
Fifidianana Kaominaly: Fanamarinana ara-ketra
Fanamarinana ara-ketra ho an'ireo ho kandida Ben'ny Tanàna na ho Mpanolo-tsainan'ny Tanàna